Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းလေးခု Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
ဘေ့စ်ဘောသည်ဥရောပ၌လူကြိုက်များသောအားကစားတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏အောင်မြင်မှုသည်မြောက်အမေရိကနှင့်အမေရိကန်ကိုပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြရန်ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်ဂိမ်းများစွာကိုဖန်တီးရန်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Android အတွက်လည်းဂိမ်းများရွေးချယ်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ကတည်းက။
ထိုကွောငျ့, ထို့နောက် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်တတ်နိုင်သမျှဂိမ်းတစ်စီးရီး Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ရယူပါ နှင့်ဤအားကစားကိုခံစားဖို့ဘယ်သူကိုနှင့်အတူ။ ဤရွေးချယ်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီရွေးချယ်မှုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကသူတို့အားလုံးကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်ပေါ်တွင်။ ဒါကြောင့်တစ်ပြားမှမသုံးဘဲဒီအားကစားကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။ စာရင်းမှာဘာဂိမ်းတွေရှိလဲ။
1 ဘေ့စ်ဘောအားကစားဖိအား 2016
2 MLB9အဝင်များ 17
4 ဘေ့စ်ဘော Kings!
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ပိုကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဤအားကစား၏ဂိမ်းတစ်ခု။ သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းတွင်အလွန်လက်တွေ့ကျသောဂရပ်ဖစ်များရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူသည်ဘေ့စ်ဘောအားကစားနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ Pကျနော်တို့ MLB တွင်ကစားနှင့်ကစားသမားကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိဂ်၏ဆုရရှိသူအဖြစ်မြင့်တက်နိုင်မှမဟာဗျူဟာဒီဇိုင်းအပြင်။ ငါတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည် ကျနော်တို့နည်းပြဖြစ်လာသည်.
La android အတွက်ဒီဘေ့စ်ဘောဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
MLB9အဝင်များ 17
နောက်ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ လက်ရှိအမေရိကန်လိဂ်ဖြစ်သော MLB အတွက်အလွန်သစ္စာရှိပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ ဒီဂိမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလိဂ်မှာရှိတဲ့အားကစားကွင်း ၃၀ မှာကစားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ပါဝါအပြင် ကစားသမား ၈၀၀ မှရွေးချယ်ပါ အဲဒါထဲမှာတည်ရှိပါတယ်။ မဖြစ်မနေ 3D ဂရပ်ဖစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ အဲဒါကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျနှင့်ထိရောက်သောအောင်ကူညီပေးသောဤဂိမ်း၏။
နောက်တဖန်, ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ သို့သော်ဂိမ်းအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်စေရန်အတွက် ၀ ယ်ယူမှုများကိုတွေ့ရသည်။
MLB9အဝင်များ 21
ဘေ့စ်ဘောမှာနေတယ် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပိုပြီးကာတွန်းဂိမ်းကိုသွားပါ။ ဒါကြောင့်ဒီထက်လက်တွေ့ကျပေမယ့်အလွန်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်က၎င်းကိုအခြားဗေဒင်တစ်ခုအနေနှင့် ပေး၍ အခြားအားကစားဂိမ်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင် သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းတွင်ဂိမ်းကစားနည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျနော်တို့ 128 အထိဂိမ်းတစ်ခုလိဂ်ကစားနိုင်ပါတယ် ငါတို့သည်လည်းစိန်ခေါ်မှု mode ကိုရှိသည်။
ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူတစ် ဦး ကပျော်စရာဂိမ်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ ကစားရန်။ The Android အတွက်ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်အခြားဂိမ်းများနည်းတူ၊ ၀ ယ်ယူမှုကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။
ရေးသားသူ: ပျော့ playus
နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု အလွန်အထူးကွဲပြားခြားနားသောဗေဒအပေါ်အလောင်းအစား, ဒါပေမယ့်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကအလွန်အထူးစေသည်။ ၎င်းတွင် 3D ဂရပ်ဖစ်ရှိပြီးအရည်အသွေးသည်အချိန်တိုင်းကောင်းမွန်သည်။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုသတိပြုသင့်ပါတယ် ထိန်းချုပ်မှုဘယ်လောက်ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဂိမ်းထဲမှာ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုအမြဲတမ်းအပြုသဘောဆောင်စေသည်။ ငါတို့မှာတစ်ခုရှိတယ် ကနေရွေးချယ်ဖို့သင်းနှင့်ကစားသမားအမြောက်အများ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနိုင်ရသကဲ့သို့၎င်းတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အင်္ဂါရပ်တွေ အမျိုးမျိုးသောဂိမ်း Modes သာတစ် ဦး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း mode ကိုအပါအဝင်။ ငါတို့ဘေ့စ်ဘောအသင်း၏အချိန်တိုင်းကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် အဲဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ la ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အခြားဂိမ်းများနည်းတူသင်အတွင်း၌ ၀ ယ်ယူမှုများလည်းရှိသည်။
ဒါ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းများဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း။ ဤခေါင်းစဉ်များကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လူကြိုက်များသောဤအားကစားကိုရှာဖွေရန် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်ဘောလုံးသို့မဟုတ်ဘတ်စကတ်ဘောဂိမ်းများမှထွက်ရန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် Android အတွက်လက်ရှိရရှိနိုင် ဘေ့စ်ဘောဂိမ်း၏ဤရွေးချယ်မှုကိုသင်မည်သို့ထင်သနည်း။ သင့်အတွက် ပို၍ ထူးခြားသောတစ်ခုရှိပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးဘေ့စ်ဘောဂိမ်းများ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး solitaire ဂိမ်းများ
Google Pixel2အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ